भूकम्पको बेला पनि यो कस्तो राजनीति ? - Enepalese.com
भूकम्पको बेला पनि यो कस्तो राजनीति ?
इनेप्लिज २०७२ वैशाख १६ गते १९:४० मा प्रकाशित
देश महाभूकम्पका कारण शोकमा छ । लाखौँ जनताहरु यतिबेला शोक र भोकमा बाँचिरहेका छन् । तर, जनता र राष्ट्रका लागि राजनीति गर्छु भन्नेहरु महाभूकम्प आउँदा समेत कुम्भकर्णझैँ मस्त निद्रामा देखिएका छन् । हजारौँ मानिस मरिरहँदा पनि उनीहरुमा कुनै चिन्ता देखिएको छैन् । केवल विज्ञप्ति जारी गर्ने र सरकारको मुख हेरेर बस्ने काममात्रै भएको छ । हो, दैवीप्रकोप बाजा बजाएर आउँदैन् । सम्पन्न राष्ट्रहरुले समेत विगतमा भूकम्पका लागि गरेका पूर्वतयारीहरु बिफल भएका छन् । यति ठूलो विपत नियन्त्रण नेपाल जस्तो राष्ट्रको काबुमा रहने कुरै रहेन । तर, राज्यले जति गर्नुपर्थ्यो , त्यो अवश्य गर्न सकेन् । भूकम्प पछिका उद्दार र राहत कार्यमा सरकारी संयन्त्र निरीह र निकम्मा नै देखियो । काठमाडौँमा त सरकारको कुनै अनुभूति थिएन भने उपत्यका बाहिरको हालत झनै कस्तो होला ? भूकम्पका नाममा करोडौँ रकम ल्याएर तालिम र गोष्ठी चलाउने गृह मन्त्रालय, भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले गरेका करोडौँ लगानीमाथि अब स्वभाविक प्रश्न उब्जिएको छ । किनकी उनीहरुले यसअघि गरेका तालिम, उद्दारका लागि गरिएका प्रशिक्षण, भूकम्पका लागि तयार पारिएका भनिएका दक्ष जनशक्ति कामै लागेन । यसको अर्थ सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले गरेको अर्बौ लगानी बालुवामा पानी भएको छ । सरकारले केही गर्न सकेन भन्ने दोष सत्तारुढ दललाई देखाएर एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले जनताको सहानुभूति जित्न खोज्नु अत्यन्तै घृणित कार्य हो ।
अझ उनीहरुको इशारामा बालुवाटार घेर्न जाने केही कथित लेखक र मानवअधिकारवादी नामधारीहरुलाई त झनै लाज लाग्नुपर्ने हो । हो, सरकारले त सकेन । सरकारको सामथ्र्य भएन् वा सामथ्र्य हुँदाहुँदै पनि त्यसको सही परिचालन भएन, त्यसको खोजी आगामी दिनमा अवश्य होला । तर, अबस्था यस्तोसम्म देखिएको छ कि महाभूकम्पले जनताको उठीबास भइरहँदा सत्तारुढ दलका नेताहरु सामाजिक सञ्जालमा सरकारको बचाउ गर्नमै व्यस्त देखिए भने विपक्षीहरु घोचपेच र जनतालाई सरकारविरुद्ध भड्काउने राम्रो मौकाको खेती गर्ने मौकाका रुपमा लिने दुष्प्रयासमा लागे । सरकारले केही गर्न सकेन भन्ने दोष सत्तारुढ दललाई देखाएर एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले जनताको सहानुभूति जित्न खोज्नु अत्यन्तै घृणित कार्य हो । अझ उनीहरुको इशारामा बालुवाटार घेर्न जाने केही कथित लेखक र मानवअधिकारवादी नामधारीहरुलाई त झनै लाज लाग्नुपर्ने हो । नेता यसकारण भनिन्छ कि उसले आफ्नो निजी र पारिवारिक स्वार्थ छाडेर देश, जनता, समाज र राष्ट्रका लागि केही गरोस् । असल नेता र दल त्यही मानिन्छ, जसले जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि जनताको साथ दिन्छ । तर, विडम्वना नै भन्नुपर्छ– सत्तारुढ होस् या प्रतिपक्षी दलका नेता, भूकम्प गएको चार दिनसम्म पनि कुनै दलका नेताहरु जनताको दुःख सुख बुझ्न सडकमा निस्केनन्, न त कठोरताका साथ रात काटिरहेका पालमा पुगे । आन्तरिक पदको झगडामा रहेका राजनीतिक दलका भातृसंगठनहरुमा पनि यसखाले चिन्ता र चासो देखिएन् । विहे, व्रतबन्ध, भातखुवाइ र श्राद्धमा समेत पुग्ने नेताहरुलाई भूकम्पका बेला टुडिँखेल र वसन्तपुरसम्म पुग्नलाई केले छेक्यो ?
प्रमुख दलमध्येका काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाबीचको झगडाको मुख्य बिऊ सत्ता नै हो । सत्ता दलहरुका लागि राजनीतिक नाटकीय स्टेज बन्दै आएको छ । राजनीतिक दलहरुका कलाले परिपूर्ण पात्र र अचम्मको दृश्यको निस्क्रिय कारुणिक मकुदर्शक नेपाली जनता बनिरहेका छन् । काँग्रेस र एमाले नेतृत्वको गठनबन्धनले उद्दार र राहत गर्न सकेन भनेर आरोप लगाउने एमाओवादी नै यतिबेला सत्ताको औद्यी भोको देखिएको छ । जुन भूकम्पको बेला पनि प्रष्टै देखियो । काँग्रेस, एमाले वा एमाओवादी किन नहुन्, यस्तो विपदको बेला पनि दलीय स्वार्थ बाहेक केही नहेर्नेहरुलाई जनताले अवश्य पनि हिसाबकिताब खोज्छन् । वास्तवमा अहिले नेपालको विशिष्टतामा साँचो राजनीतिक इमान्दारिताको खडेरी छ । राजनीति बेइमान, भ्रष्ट र अनैतिकहरुको खेतीझैं हुन पुगेको छ । कमसेकम दलहरुले भूकम्प पीडित जनता, ध्वष्त ऐतिहासिक सम्पदाका बारेमा साझा धारणा बनाऊन । तब न जनतामा पनि आशा र अपेक्षा पलाउँछ देश महाभूकम्पका कारण शोकमा छ । लाखौँ जनताहरु यतिबेला शोक र भोकमा बाँचिरहेका छन् । तर, जनता र राष्ट्रका लागि राजनीति गर्छु भन्नेहरु महाभूकम्प आउँदा समेत कुम्भकर्णझैँ मस्त निद्रामा देखिएका छन् । हजारौँ मानिस मरिरहँदा पनि उनीहरुमा कुनै चिन्ता देखिएको छैन् । केवल विज्ञप्ति जारी गर्ने र सरकारको मुख हेरेर बस्ने काममात्रै भएको छ । हो, दैवीप्रकोप बाजा बजाएर आउँदैन् । सम्पन्न राष्ट्रहरुले समेत विगतमा भूकम्पका लागि गरेका पूर्वतयारीहरु बिफल भएका छन् । यति ठूलो विपत नियन्त्रण नेपाल जस्तो राष्ट्रको काबुमा रहने कुरै रहेन । तर, राज्यले जति गर्नुपर्थ्यो , त्यो अवश्य गर्न सकेन् । भूकम्प पछिका उद्दार र राहत कार्यमा सरकारी संयन्त्र निरीह र निकम्मा नै देखियो । काठमाडौँमा त सरकारको कुनै अनुभूति थिएन भने उपत्यका बाहिरको हालत झनै कस्तो होला ? भूकम्पका नाममा करोडौँ रकम ल्याएर तालिम र गोष्ठी चलाउने गृह मन्त्रालय, भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले गरेका करोडौँ लगानीमाथि अब स्वभाविक प्रश्न उब्जिएको छ । किनकी उनीहरुले यसअघि गरेका तालिम, उद्दारका लागि गरिएका प्रशिक्षण, भूकम्पका लागि तयार पारिएका भनिएका दक्ष जनशक्ति कामै लागेन । यसको अर्थ सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले गरेको अर्बौ लगानी बालुवामा पानी भएको छ । सरकारले केही गर्न सकेन भन्ने दोष सत्तारुढ दललाई देखाएर एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले जनताको सहानुभूति जित्न खोज्नु अत्यन्तै घृणित कार्य हो ।
अझ उनीहरुको इशारामा बालुवाटार घेर्न जाने केही कथित लेखक र मानवअधिकारवादी नामधारीहरुलाई त झनै लाज लाग्नुपर्ने हो । हो, सरकारले त सकेन । सरकारको सामथ्र्य भएन् वा सामथ्र्य हुँदाहुँदै पनि त्यसको सही परिचालन भएन, त्यसको खोजी आगामी दिनमा अवश्य होला । तर, अबस्था यस्तोसम्म देखिएको छ कि महाभूकम्पले जनताको उठीबास भइरहँदा सत्तारुढ दलका नेताहरु सामाजिक सञ्जालमा सरकारको बचाउ गर्नमै व्यस्त देखिए भने विपक्षीहरु घोचपेच र जनतालाई सरकारविरुद्ध भड्काउने राम्रो मौकाको खेती गर्ने मौकाका रुपमा लिने दुष्प्रयासमा लागे । सरकारले केही गर्न सकेन भन्ने दोष सत्तारुढ दललाई देखाएर एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले जनताको सहानुभूति जित्न खोज्नु अत्यन्तै घृणित कार्य हो । अझ उनीहरुको इशारामा बालुवाटार घेर्न जाने केही कथित लेखक र मानवअधिकारवादी नामधारीहरुलाई त झनै लाज लाग्नुपर्ने हो । नेता यसकारण भनिन्छ कि उसले आफ्नो निजी र पारिवारिक स्वार्थ छाडेर देश, जनता, समाज र राष्ट्रका लागि केही गरोस् । असल नेता र दल त्यही मानिन्छ, जसले जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि जनताको साथ दिन्छ । तर, विडम्वना नै भन्नुपर्छ– सत्तारुढ होस् या प्रतिपक्षी दलका नेता, भूकम्प गएको चार दिनसम्म पनि कुनै दलका नेताहरु जनताको दुःख सुख बुझ्न सडकमा निस्केनन्, न त कठोरताका साथ रात काटिरहेका पालमा पुगे । आन्तरिक पदको झगडामा रहेका राजनीतिक दलका भातृसंगठनहरुमा पनि यसखाले चिन्ता र चासो देखिएन् । विहे, व्रतबन्ध, भातखुवाइ र श्राद्धमा समेत पुग्ने नेताहरुलाई भूकम्पका बेला टुडिँखेल र वसन्तपुरसम्म पुग्नलाई केले छेक्यो ? प्रमुख दलमध्येका काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाबीचको झगडाको मुख्य बिऊ सत्ता नै हो । सत्ता दलहरुका लागि राजनीतिक नाटकीय स्टेज बन्दै आएको छ । राजनीतिक दलहरुका कलाले परिपूर्ण पात्र र अचम्मको दृश्यको निस्क्रिय कारुणिक मकुदर्शक नेपाली जनता बनिरहेका छन् । काँग्रेस र एमाले नेतृत्वको गठनबन्धनले उद्दार र राहत गर्न सकेन भनेर आरोप लगाउने एमाओवादी नै यतिबेला सत्ताको औद्यी भोको देखिएको छ । जुन भूकम्पको बेला पनि प्रष्टै देखियो । काँग्रेस, एमाले वा एमाओवादी किन नहुन्, यस्तो विपदको बेला पनि दलीय स्वार्थ बाहेक केही नहेर्नेहरुलाई जनताले अवश्य पनि हिसाबकिताब खोज्छन् । वास्तवमा अहिले नेपालको विशिष्टतामा साँचो राजनीतिक इमान्दारिताको खडेरी छ । राजनीति बेइमान, भ्रष्ट र अनैतिकहरुको खेतीझैं हुन पुगेको छ । कमसेकम दलहरुले भूकम्प पीडित जनता, ध्वष्त ऐतिहासिक सम्पदाका बारेमा साझा धारणा बनाऊन । तब न जनतामा पनि आशा र अपेक्षा पलाउँछ देश महाभूकम्पका कारण शोकमा छ । लाखौँ जनताहरु यतिबेला शोक र भोकमा बाँचिरहेका छन् । तर, जनता र राष्ट्रका लागि राजनीति गर्छु भन्नेहरु महाभूकम्प आउँदा समेत कुम्भकर्णझैँ मस्त निद्रामा देखिएका छन् । हजारौँ मानिस मरिरहँदा पनि उनीहरुमा कुनै चिन्ता देखिएको छैन् । केवल विज्ञप्ति जारी गर्ने र सरकारको मुख हेरेर बस्ने काममात्रै भएको छ । हो, दैवीप्रकोप बाजा बजाएर आउँदैन् । सम्पन्न राष्ट्रहरुले समेत विगतमा भूकम्पका लागि गरेका पूर्वतयारीहरु बिफल भएका छन् । यति ठूलो विपत नियन्त्रण नेपाल जस्तो राष्ट्रको काबुमा रहने कुरै रहेन । तर, राज्यले जति गर्नुपर्थ्यो , त्यो अवश्य गर्न सकेन् । भूकम्प पछिका उद्दार र राहत कार्यमा सरकारी संयन्त्र निरीह र निकम्मा नै देखियो । काठमाडौँमा त सरकारको कुनै अनुभूति थिएन भने उपत्यका बाहिरको हालत झनै कस्तो होला ? भूकम्पका नाममा करोडौँ रकम ल्याएर तालिम र गोष्ठी चलाउने गृह मन्त्रालय, भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले गरेका करोडौँ लगानीमाथि अब स्वभाविक प्रश्न उब्जिएको छ । किनकी उनीहरुले यसअघि गरेका तालिम, उद्दारका लागि गरिएका प्रशिक्षण, भूकम्पका लागि तयार पारिएका भनिएका दक्ष जनशक्ति कामै लागेन । यसको अर्थ सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले गरेको अर्बौ लगानी बालुवामा पानी भएको छ । सरकारले केही गर्न सकेन भन्ने दोष सत्तारुढ दललाई देखाएर एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले जनताको सहानुभूति जित्न खोज्नु अत्यन्तै घृणित कार्य हो । अझ उनीहरुको इशारामा बालुवाटार घेर्न जाने केही कथित लेखक र मानवअधिकारवादी नामधारीहरुलाई त झनै लाज लाग्नुपर्ने हो । हो, सरकारले त सकेन ।
सरकारको सामथ्र्य भएन् वा सामथ्र्य हुँदाहुँदै पनि त्यसको सही परिचालन भएन, त्यसको खोजी आगामी दिनमा अवश्य होला । तर, अबस्था यस्तोसम्म देखिएको छ कि महाभूकम्पले जनताको उठीबास भइरहँदा सत्तारुढ दलका नेताहरु सामाजिक सञ्जालमा सरकारको बचाउ गर्नमै व्यस्त देखिए भने विपक्षीहरु घोचपेच र जनतालाई सरकारविरुद्ध भड्काउने राम्रो मौकाको खेती गर्ने मौकाका रुपमा लिने दुष्प्रयासमा लागे । सरकारले केही गर्न सकेन भन्ने दोष सत्तारुढ दललाई देखाएर एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले जनताको सहानुभूति जित्न खोज्नु अत्यन्तै घृणित कार्य हो । अझ उनीहरुको इशारामा बालुवाटार घेर्न जाने केही कथित लेखक र मानवअधिकारवादी नामधारीहरुलाई त झनै लाज लाग्नुपर्ने हो । नेता यसकारण भनिन्छ कि उसले आफ्नो निजी र पारिवारिक स्वार्थ छाडेर देश, जनता, समाज र राष्ट्रका लागि केही गरोस् । असल नेता र दल त्यही मानिन्छ, जसले जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि जनताको साथ दिन्छ । तर, विडम्वना नै भन्नुपर्छ– सत्तारुढ होस् या प्रतिपक्षी दलका नेता, भूकम्प गएको चार दिनसम्म पनि कुनै दलका नेताहरु जनताको दुःख सुख बुझ्न सडकमा निस्केनन्, न त कठोरताका साथ रात काटिरहेका पालमा पुगे । आन्तरिक पदको झगडामा रहेका राजनीतिक दलका भातृसंगठनहरुमा पनि यसखाले चिन्ता र चासो देखिएन् । विहे, व्रतबन्ध, भातखुवाइ र श्राद्धमा समेत पुग्ने नेताहरुलाई भूकम्पका बेला टुडिँखेल र वसन्तपुरसम्म पुग्नलाई केले छेक्यो ? प्रमुख दलमध्येका काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाबीचको झगडाको मुख्य बिऊ सत्ता नै हो । सत्ता दलहरुका लागि राजनीतिक नाटकीय स्टेज बन्दै आएको छ । राजनीतिक दलहरुका कलाले परिपूर्ण पात्र र अचम्मको दृश्यको निस्क्रिय कारुणिक मकुदर्शक नेपाली जनता बनिरहेका छन् । काँग्रेस र एमाले नेतृत्वको गठनबन्धनले उद्दार र राहत गर्न सकेन भनेर आरोप लगाउने एमाओवादी नै यतिबेला सत्ताको औद्यी भोको देखिएको छ । जुन भूकम्पको बेला पनि प्रष्टै देखियो । काँग्रेस, एमाले वा एमाओवादी किन नहुन्, यस्तो विपदको बेला पनि दलीय स्वार्थ बाहेक केही नहेर्नेहरुलाई जनताले अवश्य पनि हिसाबकिताब खोज्छन् । वास्तवमा अहिले नेपालको विशिष्टतामा साँचो राजनीतिक इमान्दारिताको खडेरी छ । राजनीति बेइमान, भ्रष्ट र अनैतिकहरुको खेतीझैं हुन पुगेको छ । कमसेकम दलहरुले भूकम्प पीडित जनता, ध्वष्त ऐतिहासिक सम्पदाका बारेमा साझा धारणा बनाऊन । तब न जनतामा पनि आशा र अपेक्षा पलाउँछ ।